Aktarkii Caanka Ahaa Ee Bujis Banjar Oo Ku Geeriyooday Magaalada Rome Ee Dalka Talyaaniga | Berberatoday.com
Aktarkii Caanka Ahaa Ee Bujis Banjar Oo Ku Geeriyooday Magaalada Rome Ee Dalka Talyaaniga
Roma(Berberatoday.com)-Aktarkii caanka ahaa ee aflaamta qosolka iyo maada keeni jirey Bud Spencer ayaa ku geeriyooday dalka Talyaaniga isagoo 86 sano jir ah.
Sida uu shaaciyay wiil uu dhalay Bud Spencer oo ay Soomaalidu u tiqiin Bujis Baanjar balse magaciisa saxda ahaa Carlo Pedersoli ayaan isagoo wax xanuun qabin ku geeriyooday magaalada Rome ee dalka Talyaaniga.
Aktarkan oo sidoo kale ka mid ahaa dadka dabaasha caanka ku ah dalka Talyaaniga ayaa intii u dhexeysay sanadihii 1950-1980kii sameeyay illaa iyo labaatan filim.
Dadka reer Muqdisho ayaa aad u xiiseyn jirey aflaamtiisii ku caanka ahayd qosolka iyo shactirada iyadoo shaneemooyinkii hore ee shaneemo Xamar,Centrale,Missione,Ceelgaab iyo shaleemo Hodon aad loogaga daawan jirey aflaamtiisa.
Aktarkan ayaa waxaa uu badanaa aflaamta uu sameeyo la jili jirey Terence Hill oo magaciisa dhabta ahaa Mario Girotti.
Wiil uu dhalay Bud Spencer, Giuseppe Pedersoli ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay: “Wuxuu u safray aabahay meel kale,weliba annagoo la wadajoogno hadalkiisii ugu dambeeyayna waxa uu ahaa Waad Mahadsan tihiin.”
Bujis Banjer ayaa noqday magac caan ka ah dalka Soomaaliya iyadoo gaar ahaan lagu naaneyso dadka buurbuuran maadaama aktarka uu ahaa nin buuran.